Kuyini iSonochemistry? - UHielscher
Isihloko sokusetshenziswa: "Kuyini Sonochemistry?"
I-Sonochemistry yi-application ye-ultrasound ekuphenduleni kwamakhemikhali nezinqubo. Ukunakekelwa ngokweqile kusetshenziselwa ukuqinisa ukuphendula kwamakhemikhali njengama-synthesis kanye ne-catalysis. Lapho amagagasi amakhulu e-ultrasound engamabhangqwana angaphakathi kwamanzi, isenzakalo se-acoustic cavitation senzeke. I-cavitation ye-Ultrasonic ithuthukisa ukudluliswa kwamaphakathi phakathi kwama-reactants, ishesha ukuphendula kanye / noma ivumela ukushintsha amakhemikhali endleleni.
Funda kabanzi mayelana nama-laboratory ultrasonic kanye namadivaysi asezimboni nokuthi asetshenziselwa kanjani izinqubo eziningi ze-sonochemical!